Bil kastaba waa inaad noo soo gudbisaa wargelinta hawlaha . Wargelinta hawlaha waxaad ku muujinaysaa sida aad ugu fir-fircoonayd inaad soo bandhigto nooca shaqooyinka aad raadisay iyo wixi kale ee aad samaysay si aad ugu dhawaato shaqo. Waa muhiim inaad fir-fircoonaato oo aad wargelintaada ku soo gudbiso wakhtigeeda si aad u hesho gunnada lacagta ee laga helo qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska. Waxaa kale oo ay muhiim u tahay inaanu ku siin karno taageerada saxda ah ee jidka loo marayo shaqo ama waxbarasho. Wargelinta hawlahaaga waa inay na soo gaartaa ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba.
Wargelinada laga rabo waa kuwaan
Waa inaad wargelin shaqooyinka oo aad arjay u qoratay iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee shaqo helista darteed aad sameeysay. Hab taxadarsan ku soo qor dhammaan shaqooyinka ee aad arjiga u qoratay iyo dhaqdhaqaaqyada ku xusan qorshaha adiga ku gaarka ah, laakin xitaa dhaqdhaqaaqyada kale ee aad sameeysay. Naga guddoon dhawr tusaale wararka Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten] ku soo gudbin karto:
shaqo oo aad arjay u qoratay, waxay noqon karaan kuwa la xayeeysiiyay ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan
gudbinta danaynta/codsiyada aan horay loo sii qorsheyn ama CV ee loo gudbiyo shaqabixiyayaasha.
waraysyadii shaqada lagula yeeshay iyo kulamada shaqaalaynta ee aad ka qayb gashay
goobaha shaqo ee lagu tababarto ee aad raadisay
booqasho inaad wax ka soo barato aad ku soo samaysay goobo shaqo
wada-hadal aad la yeelatay la taliye waxbarasho iyo xirfad
waxbarashooyinka aad raadisay
haddii aad baratay Iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga (sfi)
inaad cusboonaysiisay cv-gaaga.
Haddii aad xanuunsaneyd kuma qoreysid taas warbixinta aad wax qabadkaaga ka soo gudbineysid.
Way fududahay inaad samayso wargelinta hawlahaaga dhanka bogayaga intarnatka. Waxaad wargelinta hawlaha ka helaysaa boga intarnatka dhanka xiriirka arbetsformedlingen.se ama iyadoo loo marayo in la galo Mina sidor ka dibna la doorto adeega Aktivitetsrapportera.
Haddii aanad lahayn aqoonsiga elekteroonig ah waxaad warbixintaada ku buuxinaysaa foom warqad ah, waxaadna noogu soo direysaa boostada. Halkan ayaad foomka ka heleysaa:
Maskaxda ku hay in e-mayl aad noo soo dirto aanad ku samayn karin warbixinta hawlahaaga.
Adigu waa inaad soo dirtaa wargelinta hawlahaagi bishii hore, ugu horeyn 1-da iyo ugu dambeyn 14-ka bil kastaba. Waa muhiim inay na soo gaarto ugu dambeyn 14-ka bisha. Tani micnaheedu waa in adigaaga wargelintaada hawlaha ku soo diraya boosta lagaaga baahanyahay inaad sidaa samayso wakhti fiican ka hor 14-ka bil kastaba.
Tusaale: Inta u dhaxaysa 1-da iyo 14-ka Feebarwari waa inaad soo gudbisaa wargelinta hawlahaaga oo wadata hawlihii aad samaysay intii lagu jiray Jaanawari.
Adigu waxaad warbixinaha aad soo dirtay ka arki kartaa Wargelinta hawlaha halka ka hoosaysa waxa la soo diray.
Maxaa dhacaya haddii aadan firfircoonayn ama aadan warbixintaada ku soo gudbin waqtigii loogu talagalay?
Haddii aadan waqtigii loogu talagalay ku soo gudbin warbixinta dhaqdhaqaaqa ama aad si xun u maamusho shaqo-raadintaada, waxaa laga yaabaa inaad hesho digniin ama aad gunno la'aan noqoto maalin ama maalmo badan.
Haddii aad u baahantahay inaad caddayso shaqooyinka aad raadisay